10 सब भन्दा प्रसिद्ध स्थलहरू भ्रमण गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 सब भन्दा प्रसिद्ध स्थलहरू भ्रमण गर्न
ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, ट्रेन यात्रा चीन, रेल यात्रा चेक गणतन्त्र, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा रूस, ट्रेन यात्रा सल्लाह, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप
वास्तुकलामा प्रभावशाली, इतिहासको धनी, मा सब भन्दा सुन्दर शहरहरु संसारमा, को 10 सबै भन्दा प्रसिद्ध स्थलहरू रेल द्वारा भ्रमण गर्न जुन तपाइँमा हुनुपर्दछ बाल्टिन सूची. युरोप देखि चीन सम्म, बर्लिनको सबैभन्दा प्रसिद्ध गेटबाट, र निषिद्ध शहरमा, यहाँ ल्याण्डमार्कमा एक लुकेको झलक छ जुन तपाईंलाई चकित पार्नेछ.
1. एफिल टावर पेरिस
यो शानदार स्थलचिन्ह याद गर्न वास्तवमै गाह्रो छ, 300 मीटर उचाइ फलामको टावर. चाहे तपाइँ ले मराइजमा टहल गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो महिला, वा ल्याटिन क्वार्टर, पेरिसको यो विशाल आइकन जहिले पनि देखिने छ.
त्यसैले, यदि तपाइँ पेरिसको लागि पहिलो पटक यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई निश्चित रूपमा एफिल टावर भ्रमण गर्नुहुन्छ दिनको उज्यालोमा र रातमा एफिलको दृश्यको लागि सबै उज्यालो हुन्छन्. त्यसैले, तपाइँ आफ्नो भ्रमणको लागि राम्ररी तयार हुनुपर्दछ र जान्नुपर्दछ कि पेरिसको एफिल टावरसम्म यात्रा गर्ने उत्तम तरिका, वा युरोपमा कहिँ पनि.
रेलबाट कसरी एफिल टावरमा पुग्ने?
एफिल टावरको लागि यात्रा गर्नु उत्तम रेल हो. को सार्वजनिक यातायात पेरिसमा प्रणाली धेरै कुशल र सहज छ. एरनडिसेमेन्टहरू र ल्यान्डमार्कहरूमा यात्रा गर्नु एकदम सजिलो छ, र एफिल टावरको शहरको केन्द्रीय स्थानको अर्थ यो फ्रान्सेली रेलमा राम्रोसँग जडित छ.
चैम्प डी मार्स / टूर एफिल सबैभन्दा नजिकको रेल स्टेशन हो, र एफिल टावर केवल छ2स्टेशनबाट केही मिनेट पैदल. तथापि, ट्रोकाडेरो स्टेशनमा पुग्दा टावर र सिइनको थप जादुई दृश्यहरू प्रदान गर्दछ. तपाईं RER Line C लिन सक्नुहुन्छ एफिल टावरमा केहि मिनेटमा, र एकल यात्राको लागि मेट्रो टिकट € हो 1.9.
2. सब भन्दा प्रसिद्ध स्थलहरू रेल द्वारा भ्रमण गर्न: चीनको महान पर्खाल
विश्वको सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित ल्यान्डमार्क, चीनको महान पर्खालले कब्जा गर्यो 2000 वर्ष निर्माण गर्न. पहिलो पर्खाल निर्माण सातौं शताब्दीको सुरूमै सुरू भयो, र पछि थप पर्खालहरू थप्नका लागि जोडियो र चीनको महान पर्खाललाई विश्वको विशाल र दिमागमा उब्जाउने ठाउँहरू मध्ये एकमा परिणत गरियो।.
चीनको महान पर्खाल यति विशाल छ, तपाईं यसलाई धेरैबाट प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ चीन भरि ठाउँहरू, र लिन सक्छ 175 दिन यसलाई पूर्ण पार गर्न. तथापि, बेइजि is चीनको महान पर्खालको प्रशंसा गर्ने सब भन्दा राम्रो ठाउँ हो, बेइजि of को उपनगरहरु, र बदालि like जस्ता शहरहरू. निष्कर्षमा पुग्न गर्न, चीनको आकारको ठूलो पर्खाल, ऐतिहासिक महत्व, र यस संसारको डिजाइनले यसलाई एक बनाउँछ 10 सबै भन्दा प्रसिद्ध स्थलहरू रेल द्वारा भ्रमण गर्न.
बेइजि Fromबाट चीनको ठूलो पर्खालमा कसरी पुग्ने?
तपाईंले मेट्रोबाट Huoying स्टेशन यात्रा गर्नु पर्छ वा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन लिनु पर्छ. त्यसपछि Huangtudian रेलवे स्टेशन बाट S2 ट्रेन ले Bading रेलवे स्टेशन को लागी. तपाईं महान पर्खाल प्रवेशद्वार देख्नुहुनेछ रेलवे स्टेशन बाट २० मिनेट पैदल.
3. सब भन्दा प्रसिद्ध स्थलहरू रेल द्वारा भ्रमण गर्न: सिस्टिन चैपल भ्याटिकन सिटी
माइकलएन्जेलो सुन्दर फ्रेस्कोस युगहरु देखि अचम्मित आगन्तुकहरु को छ. सिस्टिन चैपल इन भेटिकन सिटी गर्मीमा शुक्रवार साँझ र रात घुम्न उत्तम छ जब यो कम भीड हो. संसारको सब भन्दा ठूलो कलाकृति भ्याटिकन संग्रहालयहरू मार्फत पहुँचयोग्य छ, र तपाइँ यो प्रविष्ट गर्न एक समय बुक गर्न आवश्यक छैन.
सिस्टिन चैपल छैटौं पोपको नाममा छ, जसले यो १ 15 औं शताब्दीमा बनायो. यसरी, सिस्टिन चैपलमा छतलाई सजाउने फ्रेस्कोले उत्पत्तिको पुस्तकका कथाहरू चित्रण गर्दछन्. उल्लेखनीय रंग स्ट्रोक र रंगहरूमा, फ्रेस्कोहरू राम्रोसँग संरक्षित छन्, र तपाइँ सजिलै दिनभरि दृष्यहरूको प्रशंसा गर्न बिताउन सक्नुहुन्छ.
रोमबाट सिस्टिन चैपलमा कसरी पुग्ने?
सिस्टिन चप्पल भ्याटिकन शहरमा छ, रोम बाहिर. त्यसैले, यदि तपाईं मिलानबाट भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ, युरोपमा फ्लोरेन्स वा अन्य गन्तव्य, तपाईले पहिले लिनु पर्छ उच्च गतिको रेल रोम. त्यसपछि, रोमा तिबुर्तिना बाट रोमा स्ट्रीट को लागी ट्रेन लिनुहोस्. Pietro स्टेशन, र यो 14 मिनेट Sistine चैपल को लागी.
बुडापेस्ट वा भियना बाट, यो कहिल्यै युरोप मा कुनै पनि बिन्दुबाट चार्ल्स ब्रिज यात्रा गर्न सजिलो भएको छैन. त्यो अचम्मको कुरा होइन, प्रागमा चार्ल्स ब्रिज ट्रेनबाट अवलोकन गर्ने सबैभन्दा प्रसिद्ध स्थलहरू मध्ये एक हो भन्ने तथ्यलाई विचार गर्दै. गोथिक स्टोन ब्रिज, मूर्तिहरू, माला स्ट्राना र पुरानो शहर बीचको केन्द्रीय स्थान, यसको गौरवका केही कारणहरू मात्र हुन्.
यसबाहेक, चार्ल्स ब्रिज यूरोपमा सबैभन्दा सुन्दर र सबै भन्दा पुरानो पुलहरू मध्ये एक हो. त्यसैले, तपाईं उत्तम खोजीमा सयौं पर्यटकहरू भेट्नुहुनेछ इन्स्टाग्राम तस्वीर ब्रिजमा स्पट. हो, दिन र बर्षको कुनै पनि समयमा, तपाईं प्रागमा धेरै आगन्तुकहरू सामेल हुनुहुनेछ संसारको सबैभन्दा प्रसिद्ध ठाउँहरू मध्ये एकको प्रशंसा गर्न.
रेलमार्फत चार्ल्स ब्रिजमा कसरी पुग्ने?
रेल यात्रा युरोप मा धेरै सहज र छिटो छ, ताकि तपाईं कुनै पनि छिमेकी देशहरूबाट चार्ल्स ब्रिजमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ. मुख्य रेल स्टेशन बाट (स्थानीय भाषामा: केन्द्रीय स्टेशन), यो बारेमा छ 13 चार्ल्स ब्रिजको मेट्रोबाट मिनेट. तपाईं त्यहाँ पैदल पनि पुग्न सक्नुहुन्छ, यो एक 25 रेल स्टेशनबाट चार्ल्स ब्रिजमा मिनेट पैदल, तर कम सिफारिश गरियो यदि तपाईं ड्रेस्डेनबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने, बुडापेस्ट, वा Zermatt.
5. सब भन्दा प्रसिद्ध स्थलहरू रेल द्वारा भ्रमण गर्न: सेन्ट. बासिलको क्याथेड्रल मस्को
तिनी हरु मध्ये शानदार वर्गहरु संसारमा, मस्कोको रेड स्क्वायर सबैभन्दा सास फेर्ने क्याथेड्रलको घर छ. सेन्ट. बासिलको क्याथेड्रल अद्भुत छ, संग6चैपलहरू, सुन्दरता र कलात्मक हिसाबले ज्यामितीय ढाँचामा चित्रित. भव्य क्याथेड्रल अनुहार र भित्री सुन्दर छ, खोपेर र चित्रहरु संग सजिलो हरेक चैपल संग.
सेन्ट. तुलसी कैथेड्रल मास्को को शीर्ष प्रतीकहरु मध्ये एक हो र भयानक इवान को हार को लागी एक विजय प्रतीक को रूप मा बनाइएको थियो, काजानको खान. यसरी, देखि 1561 यो हेर्न को लागी प्रत्येक वर्ष लाखौं पर्यटक लाई आकर्षित गरीरहेको छ 1 रसियामा सब भन्दा चिन्तित स्थलहरूको.
कसरी St मा पुग्ने. बासिलको क्याथेड्रल?
सेन्ट बेसिलको क्याथेड्रल रेड स्क्वायरमा छ, र तपाईं लेनिनग्रास्की स्टेशनबाट ओखोटनी र्याडको सबवे लिन सक्नुहुन्छ. यदि तपाइँ रूसको सर्वश्रेष्ठ हेर्न चाहनुहुन्छ भने, तब सेन्ट बाट एक उच्च-गति ट्रेन. पीटर्सबर्ग यात्रा गर्नका लागि आदर्श मार्ग हो.
6. Str मा पीटरहोफ प्यालेस. पीटर्सबर्ग
रूसी भर्साइल्स पिटर ग्रेटले आफ्नो देशको सम्पत्तिको रूपमा बनाए. तपाइँकोमा पीटरहोफ प्यालेसमा यात्रा, तपाईं तल्लो पार्क भ्रमण गर्नुहुनेछ, माथिल्लो बगैचा, समुद्री च्यानल, र दुई साना दरबारहरू – Monplaisir र Marli दरबार. १ Peter70० को दशकमा पिटर दि ग्रेट भ्रमण भेरसेल्स.
जारको दरबार फोहोरका लागि सबैभन्दा प्रसिद्ध छ, भव्य नदीहरू, बाइबलीय मूर्तिहरु, र बगैचाहरु. जर्मनहरूले WWII मा यो भव्य दरबार नष्ट गरे तर सफलतापूर्वक यसलाई नयाँ बनाउनको लागि एक बन्यो यूनेस्को विश्व विरासत साइट.
कसरी पिटरहफमा पुग्ने?
सेन्टमा भ्रमण गर्नका लागि पिटरहोफ दरबार शीर्ष स्थलहरू मध्ये एक हो. पीटर्सबर्ग. तपाईं Baltiskiy स्टेशन बाट Noviy Peterhof स्टेशन रेल बाट पीटरहफ यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ.
7. सब भन्दा प्रसिद्ध स्थलहरू रेल द्वारा भ्रमण गर्न: कोलोजियम रोम
कोलोसियम आधुनिक संसारको सात आश्चर्य मध्ये एक हो, त्यसैले, यो मार्गनिर्देशनको भ्रमणको साथ कोलोसियम भ्रमण गर्नु उत्तम हो. अन्यथा, को सम्पूर्ण समृद्ध इतिहास यस महान निर्माण को तपाइँ को लागी हराउनु हुनेछ. फ्लाभियन सम्राटहरूले यो उत्कृष्ट नमुनालाई एम्फीथिएटरको रूपमा बनाए, भीडलाई वर्षा र बतासबाट बचाउने विचारको साथ, दिमागमा.
आज तपाईले कोलोसियमको सबै तहको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, वा नजिकैका धेरै रेस्टुरेन्टहरू र क्याफेहरूबाट यसलाई प्रशंसा गर्नुहोस्. साथै, अहिलेसम्म निर्माण गरिएको सबैभन्दा ठूलो कोलोसियम, आजको रूपमा प्रयोग गरीन्छ प्रत्यक्ष संगीत कन्सर्ट स्थल. यहाँ, तपाईं संगीत दुनिया मा सबैभन्दा ठूला नामहरू देख्नुहुनेछ, जस्तै एल्टन जोन.
कोलोसिअममा कसरी पुग्ने?
तपाईं रोममा दुबै एयरपोर्टहरूबाट कलसियम पुग्न सक्नुहुनेछ, रेल बाट. त्यहाँ छोड्ने ट्रेनहरू छन् 15 मिनेट तिब्बर्टीना स्टेशनमा, र त्यसपछि मेट्रो द्वारा सिधा यस इटालियन प्रतिमा. स्पष्ट रूपमा, रोमको ऐतिहासिक केन्द्रबाट कोलोसियमसम्म पुग्न यो धेरै नै सजिलो छ.
8. सब भन्दा प्रसिद्ध स्थलहरू रेल द्वारा भ्रमण गर्न: लन्डनमा वेस्टमिन्स्टर प्यालेस
इ England्ल्यान्डको सब भन्दा प्रसिद्ध स्थलचिन्ह वेस्टमिन्स्टर प्यालेस र बिग बेन टावर हो. संसदका सदनहरू. भिक्टोरिया टावर र विश्वमा सब भन्दा प्रसिद्ध टावर, बिग बेन, इ England्ल्याण्डको सबैभन्दा प्रख्यात स्थलचिन्ह बनाउनुहोस्.
नदी टेम्सलाई हेरेर, नजिकै लन्डन आँखा आकर्षण संग, वेस्टमिन्स्टर प्यालेसको वरिपरि सेटिंग शानदार छ. आश्चर्यजनक दृश्य दृश्यहरूको लागि, सम्पूर्ण वर्ष लन्डन आई भ्रमण गर्नुहोस्, किनकि वेस्टमिन्स्टरमा प्रवेश केवल शनिबार मात्र सम्भव छ, जुलाई र अगस्टको बखत.
वेस्टमिन्स्टर दरबार र बिग बेनमा कसरी पुग्ने?
सर्कल ट्यूब लाइन वेस्टमिन्स्टर वा ट्राफलगर स्टेशनहरूमा लैजानुहोस्. यदि तपाईं लन्डन उपनगरहरुबाट आएका हुनुहुन्छ, युके वा युरोपमा कहिँ पनि, त्यसोभए दक्षिण पश्चिमी रेलवे यात्राको उत्तम मार्ग हुनेछ.
9. निषिद्ध शहर चीन
बेइजि ofको केन्द्रमा, तपाईं संसारको सबैभन्दा ठूलो शाही महलमा प्रवेश पाउन सक्नुहुनेछ. पिटरहोफ भन्दा ठूलो, लुभ्रे, क्रेमलिन, र भ्याटिकन, निषेधित शहर दरबार छ 980 दरबार भवनहरू खोजी गर्न. संसारका अन्य सीमानाहरूका विपरित, यो सबै काठको बनेको छ. संग 25 विगतमा दरबारमा चिनियाँ सम्राटहरू बस्थे, वर्जित शहर विश्वको सबैभन्दा ठूलो संग्रहालय हो.
असाधारण ल्यान्डमार्कले आजकल धर्मी रूपमा यसको नाम कमाएको छ. यो तथ्यको कारणले हो 40% दरबारको पर्यटकहरु लाई अझै पनि निषेध गरिएको छ. तथापि, तपाईं अझै Jingshan पार्क मा एक पहाडबाट सम्पूर्ण परिसर देख्न सक्नुहुन्छ. निषिद्ध शहर एक हुन सक्दैन युरोपमा सब भन्दा रंगीन र सुन्दर दरबारहरू, तर यो सबै भन्दा रोचक छ.
म कसरी निषेधित शहरमा पुग्ने?
शंघाई बेइजि। को बारे मा छ5रेल द्वारा घण्टा, तर बेइजि in मा, तपाईं मेट्रो निषेध शहर को लागी लिन सक्नुहुन्छ.
10. सब भन्दा प्रसिद्ध स्थलहरू रेल द्वारा भ्रमण गर्न: ब्रानडेनबर्ग गेट बर्लिन
ब्रान्डनबर्ग गेट बर्लिनको सब भन्दा महत्वपूर्ण ल्यान्डमार्क हो, किनकि यो आइरन पर्दाको प्रतीक हो र एक पटक बर्लिन विभाजित हुन्छ. गेट प्रारम्भमा प्रशियन राजा फ्रेडरिक विलियम द्वितीयले निर्माण गरेका थिए, १ 18 औं शताब्दीमा. यसरी, यस प्रतिमा पछाडि ईतिहासको बारेमा जान्नको लागि उत्तम तरिका, छोटकरीमा र अन्य यात्रुहरूलाई भेट्दा, एक निर्देशित पैदल यात्रा द्वारा छ.
दिउँसो र सप्ताहन्तमा, पेरिसर प्लेट्ज धेरै स्थानीय कलाकार र संगीतकारहरूको लागि मंच बन्छ. तपाईं स्थानीयहरू पनि ढोकाबाट साइकल चलाएर र बसिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ, च्याट गर्दै, गेटबाट सूर्य किरणहरू हेर्दै कुर्दै.
म कसरी ब्रान्डनबर्ग गेटमा पुग्छु?
ब्रान्डनबर्ग गेटका लागि यात्रा गर्ने सब भन्दा सुविधाजनक तरीका S-Bahn लाइनहरू द्वारा हो, सबवे प्रणाली. कुनै पनि लाइन लिनुहोस् जुन ब्रान्डनबर्गर टोर स्टेशनमा जान्छ.
निष्कर्षमा पुग्न, ठाउँ, ऐतिहासिक महत्व, वास्तुकला, र यी धेरै स्थानहरूको विशालताले हरेक वर्ष लाखौं पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दछ. जस्तो कि तपाईं प्रत्येक एकल ल्यान्डमार्कको अगाडि उभिनुहुन्छ, यूरोपमा, रूस, वा चीन, तपाईं केवल प्रत्येक साइटको सौन्दर्य र सिर्जनामा ​​चकित हुनुहुनेछ.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईंलाई यी मध्ये एउटा योजना बनाउन सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं 10 रेल द्वारा दुनिया मा सब भन्दा प्रसिद्ध स्थलहरु.
के तपाइँ हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "१० सबैभन्दा प्रसिद्ध स्थलहरू रेल द्वारा भ्रमण गर्न" तपाइँको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fne%2Fmost-famous-landmarks-visit-rail%2F - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, र तपाईं / fr वा / यो र अधिक भाषा गर्न / डे परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
प्रसिद्ध ल्याण्डमार्क स्थलचिन्हहरु सबैभन्दा प्रसिद्ध ल्याण्डमार्क साइनेरोप रेल यात्रा travelbytrain